မသင်္ကာစရာ တူညီလွန်းနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားများ - CantWait2Say
မသင်္ကာစရာ တူညီလွန်းနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားများ
မော်ဒန်ခေတ်ရုပ်ရှင်လောကဟာ အပြိုင်အဆိုင်များလှပြီး တစ်နှစ်ကို ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ ထုတ်လုပ်နေတာကြောင့် တူညီတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို တွေ့ရတတ်တာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တချို့ဇာတ်ကားတွေကတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကူးချထားသလားထင်ရအောင် ဆင်တူနေတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပြောချင်လွန်းလို့ တို့အတွက် ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ခံကျောရိုးနဲ့ ပါဝင်တဲ့ ကာရိုက်တာတွေ အတော်လေးတူညီနေတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ယှဉ်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။
၁. Madagascar (2005 ခုနှစ်) နှင့် The Wild (2006)
၂၀၀၅ ခုနှစ်က Madagascar ဟာ အောင်မြင်တဲ့ Franchise တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီး နယူးယောက်မြို့ တိရစ္ဆာန်ရုံကနေ ထွက်ပြေးပြီး မာဒါဂတ်စကာကျွန်းစုလေးပေါ်ရောက်သွားတဲ့ ခြင်္သေ့၊ မြင်းကျား၊ သစ်ကုလားအုတ်၊ ရေမြင်းတို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက်ကို အခြေခံထားတဲ့ ဟာသကာတွန်းကားဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နှစ်မှာ ထွက်လာတဲ့ The Wild မှာတော့ Ryan လို့ခေါ်တဲ့ ချစ်စရာခြင်္သေ့လေးဟာ နယူးယောက် တိရစ္ဆာန်ရုံနဲ့ အာဖရိကကို လေဆိပ်ကမှားပို့လိုက်တဲ့အတွက် သူ့ဖခင် ခြင်္သေ့က ကိုအာလာ၊ မိချောင်း၊ ပုတ်သင်ညို၊ သစ်ကုလားအုတ်နဲ့ ရှဉ့်တို့ကို အဖော်ပြုပြီး တိရစ္ဆာန်ရုံက ထွက်ပြေးကာ Ryan ကို လိုက်ရှာဖွေတဲ့ အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂. The Book of Life (2014) နှင့် Coco (2017)
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Manolo နဲ့ Joaquin တို့ဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အတူတူ ချစ်ကြိုက်မိကြတယ်။ ဒီအခါမှာ တမလွန်ဘဝကိုစောင့်တဲ့ နတ်ဘုရားနှစ်ပါးက သူတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဘယ်သူက မိန်းကလေးရဲ့ အချစ်ကို ရမလဲဆိုတာ အလောင်းအစား လုပ်ကြပါတော့တယ်။ ဒီအခါ Manolo ဟာ ဂစ်တာတစ်လက်ကို ကိုင်စွဲကာ တမလွန်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ချစ်ရတဲ့သူဆီ ပြန်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ။
Coco ကိုတော့ တော်တော်များများသိကြမှာပါ။ သီချင်းတွေ၊ တမလွန်ဘဝနဲ့ ဝိဥာဉ်တွေ၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ချစ်မေတ္တာတို့ကို အခြေခံထားတဲ့ လှပတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါပဲ။
၃. Kung Fu Panda (2008) နှင့် Chop Kick Panda (2011)
Po လို့ခေါ်တဲ့ ရှပ်ပြာပြာ ပန်ဒါလေးဟာ နဂါးသူရဲကောင်းရွေးချယ်ပွဲကို သွားကြည့်မိရာကနေ သူ့ကို နဂါးသူရဲကောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတယ်။ နဂါးသူရဲကောင်းကို စိန်ခေါ်ဖို့ အကျဉ်းထောင်ထဲက ထွက်ပြေးလာတဲ့ ကျားသစ် မိစ္ဆာသိုင်းသမားကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ထွက်လာခဲ့တဲ့ Chop Kick Panda ထဲမှာ အဓိကဇာတ်ကောင်က Zibo လို့ခေါ်တဲ့ ပန်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း သိုင်းသူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သူပါ။ ကိုယ်ခံပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှနားမလည်ပေမယ့် မိစ္ဆာ ကျားတစ်ကောင်ရဲ့ ရန်ကနေ သူ့တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၄. Sky Force (2012) နှင့် Planes: Fire and Rescue (2014)
Sky Force ဟာ ကောင်းကင်ယံက အရေးပေါ်အထူးတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် အဖွဲ့ဝင် Ace ဟာ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ မစ်ရှင်တစ်ခုအပြီး ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ရပ်ကြောင့် စွန့်ခွာခဲ့တယ်။ ဘဝဟောင်းကို မမေ့နိုင်သေးတဲ့ Ace ဟာ အရေးကြုံလာတဲ့အခါ သူ့အကြောက်တရားကို ကျော်လွှားပြီး လုပ်သင့်တာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Disney ရဲ့ Planes အန်နီမေးရှင်းဟာ သူတို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Cars တနုးကလိုမျိုး ပြိုင်ကားတွေအစား အဓိကဇာတ်ကောင်နေရာမှာ လေယာဉ်တွေကို ထားထားတဲ့ အန်နီမေးရှင်းတစ်ခုပါပဲ။ Dusty ရဲ့အင်ဂျင်ဟာ ယိုယွင်းနေပြီး ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်မပြိုင်နိုင်တော့တဲ့ အနေအထားတစ်ခုပါ။ ဒီအခါမှာ တောမီးတစ်ခုကို တားဆီးဖို့ ကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ရာကနေ ဂုဏ်ယူစရာ မီးသတ်သမားလေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၅. Ratatouille (2007) နှင့် Ratatoing (2007)
Remi ဆိုတဲ့ ကြွက်ကလေးဟာ စားဖိုမှူးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူကိုယ်တိုင် နာမည်ကြီးစားဖိုမှူး တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်ရှိသူပါ။ တစ်နေ့မှာ ငယ်ရွယ်တဲ့ မီးဖိုချောင်အလုပ်သမားလေးနဲ့ အတူလက်တွဲပြီး နာမည်ကြီး ပြင်သစ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုထဲမှာ လက်စွမ်းပြခွင့်ရလာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီနာမည်ကြီးဇာတ်ကားနဲ့ တစ်နှစ်တည်းထွက်ခဲ့တဲ့ Ratatoing မှာတော့ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့မှာ စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုကို ပိုင်တဲ့ Marcelle Toing ဆိုတဲ့ ကြွက်လေးကို အခြေခံထားပါတယ်။ သူက လူတွေရဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေကနေ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ခိုးယူပြီး ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်လေးမှာ စိတ်ကြိုက်လက်စွမ်းပြန်ပြနေတာပါ။
မသင်ျကာစရာ တူညီလှနျးနတေဲ့ ရုပျရှငျကားမြား
မျောဒနျခတျေရုပျရှငျလောကဟာ အပွိုငျအဆိုငျမြားလှပွီး တဈနှဈကို ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာ ထုတျလုပျနတောကွောငျ့ တူညီတဲ့ အတှေးအချေါနဲ့ ဇာတျကားတှကေို တှရေ့တတျတာ မဆနျးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တခြို့ဇာတျကားတှကေတော့ တဈခုနဲ့တဈခု ကူးခထြားသလားထငျရအောငျ ဆငျတူနတောကို တှရေ့တတျပါတယျ။ ပွောခငျြလှနျးလို့ တို့အတှကျ ဒီတဈခါတော့ နောကျခံကြောရိုးနဲ့ ပါဝငျတဲ့ ကာရိုကျတာတှေ အတျောလေးတူညီနတေဲ့ ဇာတျကားတှကေို ယှဉျပွီးဖျောပွပေးလိုကျပါရစေ။
၁. Madagascar (2005 ခုနှဈ) နှငျ့ The Wild (2006)
၂၀၀၅ ခုနှဈက Madagascar ဟာ အောငျမွငျတဲ့ Franchise တဈခုဖွဈလာခဲ့ပွီး နယူးယောကျမွို့ တိရစ်ဆာနျရုံကနေ ထှကျပွေးပွီး မာဒါဂတျစကာကြှနျးစုလေးပျေါရောကျသှားတဲ့ ခွင်ျသေ့၊ မွငျးကြား၊ သဈကုလားအုတျ၊ ရမွေငျးတို့ သူငယျခငျြးလေးယောကျကို အခွခေံထားတဲ့ ဟာသကာတှနျးကားဖွဈပါတယျ။
နောကျတဈနှဈမှာ ထှကျလာတဲ့ The Wild မှာတော့ Ryan လို့ချေါတဲ့ ခဈြစရာခွင်ျသလေ့ေးဟာ နယူးယောကျ တိရစ်ဆာနျရုံနဲ့ အာဖရိကကို လဆေိပျကမှားပို့လိုကျတဲ့အတှကျ သူ့ဖခငျ ခွင်ျသကေ့ ကိုအာလာ၊ မိခြောငျး၊ ပုတျသငျညို၊ သဈကုလားအုတျနဲ့ ရှဉျ့တို့ကို အဖျောပွုပွီး တိရစ်ဆာနျရုံက ထှကျပွေးကာ Ryan ကို လိုကျရှာဖှတေဲ့ အကွောငျးဖွဈပါတယျ။
၂. The Book of Life (2014) နှငျ့ Coco (2017)
အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးတှဖွေဈတဲ့ Manolo နဲ့ Joaquin တို့ဟာ မိနျးကလေးတဈယောကျကို အတူတူ ခဈြကွိုကျမိကွတယျ။ ဒီအခါမှာ တမလှနျဘဝကိုစောငျ့တဲ့ နတျဘုရားနှဈပါးက သူတို့သူငယျခငျြးနှဈယောကျ ဘယျသူက မိနျးကလေးရဲ့ အခဈြကို ရမလဲဆိုတာ အလောငျးအစား လုပျကွပါတော့တယျ။ ဒီအခါ Manolo ဟာ ဂဈတာတဈလကျကို ကိုငျစှဲကာ တမလှနျကမ်ဘာတဈခုလုံးကို ကြျောဖွတျပွီး ခဈြရတဲ့သူဆီ ပွနျနိုငျဖို့ ကွိုးစားရမှာပါ။
Coco ကိုတော့ တျောတျောမြားမြားသိကွမှာပါ။ သီခငျြးတှေ၊ တမလှနျဘဝနဲ့ ဝိဉာဉျတှေ၊ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ ခဈြမတ်ေတာတို့ကို အခွခေံထားတဲ့ လှပတဲ့ ဇာတျလမျးတဈခုပါပဲ။
၃. Kung Fu Panda (2008) နှငျ့ Chop Kick Panda (2011)
Po လို့ချေါတဲ့ ရှပျပွာပွာ ပနျဒါလေးဟာ နဂါးသူရဲကောငျးရှေးခယျြပှဲကို သှားကွညျ့မိရာကနေ သူ့ကို နဂါးသူရဲကောငျးအဖွဈ ရှေးခယျြခံလိုကျရတယျ။ နဂါးသူရဲကောငျးကို စိနျချေါဖို့ အကဉျြးထောငျထဲက ထှကျပွေးလာတဲ့ ကြားသဈ မိစ်ဆာသိုငျးသမားကိုလညျး ရငျဆိုငျရဖို့ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၁ ခုနှဈမှာ ထှကျလာခဲ့တဲ့ Chop Kick Panda ထဲမှာ အဓိကဇာတျကောငျက Zibo လို့ချေါတဲ့ ပနျဒါလေးဖွဈပါတယျ။ သူကလညျး သိုငျးသူရဲကောငျးတဈယောကျဖွဈခငျြသူပါ။ ကိုယျခံပညာနဲ့ ပတျသကျလို့ ဘာမှနားမလညျပမေယျ့ မိစ်ဆာ ကြားတဈကောငျရဲ့ ရနျကနေ သူ့တိုငျးပွညျကို ကာကှယျဖို့ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၄. Sky Force (2012) နှငျ့ Planes: Fire and Rescue (2014)
Sky Force ဟာ ကောငျးကငျယံက အရေးပျေါအထူးတိုကျခိုကျရေးအဖှဲ့ပါ။ ဒါပမေယျ့ အဖှဲ့ဝငျ Ace ဟာ အန်တရာယျကွီးတဲ့ မဈရှငျတဈခုအပွီး ဝမျးနညျးစရာဖွဈရပျကွောငျ့ စှနျ့ခှာခဲ့တယျ။ ဘဝဟောငျးကို မမနေို့ငျသေးတဲ့ Ace ဟာ အရေးကွုံလာတဲ့အခါ သူ့အကွောကျတရားကို ကြျောလှားပွီး လုပျသငျ့တာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရငျဆိုငျတဲ့ အကွောငျးကို မွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
Disney ရဲ့ Planes အနျနီမေးရှငျးဟာ သူတို့အောငျမွငျခဲ့တဲ့ Cars တနျုးကလိုမြိုး ပွိုငျကားတှအေစား အဓိကဇာတျကောငျနရောမှာ လယောဉျတှကေို ထားထားတဲ့ အနျနီမေးရှငျးတဈခုပါပဲ။ Dusty ရဲ့အငျဂငျြဟာ ယိုယှငျးနပွေီး ပွိုငျပှဲတှေ ဝငျမပွိုငျနိုငျတော့တဲ့ အနအေထားတဈခုပါ။ ဒီအခါမှာ တောမီးတဈခုကို တားဆီးဖို့ ကယျဆယျရေးတပျဖှဲ့နဲ့ ပူးပေါငျးခဲ့ရာကနေ ဂုဏျယူစရာ မီးသတျသမားလေး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၅. Ratatouille (2007) နှငျ့ Ratatoing (2007)
Remi ဆိုတဲ့ ကွှကျကလေးဟာ စားဖိုမှူးကောငျးတဈယောကျဖွဈပွီး သူကိုယျတိုငျ နာမညျကွီးစားဖိုမှူး တဈယောကျဖွဈခငျြတဲ့ အိပျမကျရှိသူပါ။ တဈနမှေ့ာ ငယျရှယျတဲ့ မီးဖိုခြောငျအလုပျသမားလေးနဲ့ အတူလကျတှဲပွီး နာမညျကွီး ပွငျသဈစားသောကျဆိုငျတဈခုထဲမှာ လကျစှမျးပွခှငျ့ရလာခဲ့ပါတော့တယျ။
ဒီနာမညျကွီးဇာတျကားနဲ့ တဈနှဈတညျးထှကျခဲ့တဲ့ Ratatoing မှာတော့ ရီယိုဒီဂနြေးရိုးမွို့မှာ စားသောကျဆိုငျလေးတဈခုကို ပိုငျတဲ့ Marcelle Toing ဆိုတဲ့ ကွှကျလေးကို အခွခေံထားပါတယျ။ သူက လူတှရေဲ့ စားသောကျဆိုငျတှကေနေ လိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ခိုးယူပွီး ကိုယျပိုငျစားသောကျဆိုငျလေးမှာ စိတျကွိုကျလကျစှမျးပွနျပွနတောပါ။
နန်းတော်တမျှခမ်းနားလှတဲ့ ကမ္ဘာကျော်တွေရဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများ
ပရိသတ်တွေကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေတဲ့ Spider-Man မင်းသား Tom Holland ရဲ့ ကေအသစ်
Hollywood ရဲ့ အကျည်းတန်ဆုံးနဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံးကွာရှင်းပြတ်စဲမှုတွေ
အနုပညာလောကက အပြီးတိုင်အနားယူတော့မယ်ဆိုတဲ့ Won Bin (ထယ်စောက်)
အရင်ရည်းစားနဲ့လမ်းခွဲပြီး Selena Gomez နဲ့အတူရှိနေတာကိုရင်ဖွင့်လာတဲ့ Nail Horan